3. Igumbi elikhulu neliqaqambileyo elikufutshane neWarsaw
Igumbi lakho lokulala e indlu ekumhlaba osikelwe izindlu sinombuki zindwendwe onguEwa
Eli gumbi lingalala ukusuka kumntu omnye ukuya kwaba-3. Kukho ibhedi enye ephindwe kabini, i-sofa engasongekiyo kwaye, ukuba kuyimfuneko, singongeza i-mattress eyongezelelweyo phantsi.
Sele sirenta amagumbi amabini endlini yethu nge airbnb, le yeyesithathu. Zonke iindwendwe zinegumbi elinye lokuhlambela elikhoyo.
Thina njengababuki zindwendwe sikwisiza phantse ngalo lonke ixesha, kodwa sizama ukunika iindwendwe zethu ubumfihlo obuninzi kangangoko sinakho. Intaba yonke ifumaneka kuphela kwiindwendwe.
Ngexesha lokuhlala kwakho nathi ePodkowa, singathanda ukuba uzive usekhaya, ngoko senza zonke iinzame zokuqinisekisa ukuba amagumbi ahlambuluke ngokugqibeleleyo, iimveliso zesidlo sakusasa zintsha kwaye zikumgangatho ophezulu.
Kuya kuhlala kukho ikofu, iti, iisiriyeli, ubisi kunye namaqanda amatsha asimahla alindileyo ekhitshini.
Ikhitshi lethu likuwe, kufuneka nje uvumelane ngezinto zokusebenza - ngubani xa;)
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye amathandabuzo, nceda uqhagamshelane nathi :) Kwaye khumbula, akukho ndlela yokuphuma! ;)
Indlu yimizuzu emi-5 yokuhamba ukusuka kuloliwe we-WKD wasekhaya, oya kukusa kumbindi weWarsaw rhoqo ngemizuzu eyi-15. Ixesha lokuhamba ukuya kwikomkhulu yimizuzu engama-40 kuphela, kwaye ngemoto (ngaphandle kokuxinana kwezithuthi) - malunga nemizuzu engama-30.
Kukho malunga nama-4,000 abantu kwidolophu yethu, sinepaki yedolophu entle - ihlathi elincinci, kunye necawa entle enechibi, iipikoko kunye negadi entle ngokumangalisayo. Zininzi iindlela zebhayisekile esixekweni. Umtsalane owongezelelweyo kukukufutshane kwehlathi laseMłochowski.
EGrodzisk Mazowiecki, kumgama nje oziikhilomitha ezi-5, kukho indawo yokuqubha yangaphakathi, icinema kunye nebhola ekhatywayo.
IPodkowa Leśna yayisisixeko sokuqala ePoland ukufumana iwonga lesixeko sasegadi.
Le ndawo inemithi, sineevillas ezindala ezintle apha kwaye kukho ubuso obudumileyo phakathi kwabemi.
Iikonsathi, iintetho kunye nemiboniso ibanjwe kwiindawo zangaphakathi ezigciniweyo zendlu yase-Iwaszkiewicz e-Stwisko.
Abamelwane bethu bangama-squirrels, ama-hedgehogs, kunye neentaka ziye zacula kuthi ukususela ngo-5 ekuseni.
Mna nomyeni wam silapha, yiba kule ndawo ungayeki. Ukuba asikwazi kuthetha okanye sihambe, umzukulwana wethu uMagda uhlala efowuna, naye uhlala kwalapha, ngoko xa kukho ingxaki, anganceda.